November 29, 2021 N88LeaveaComment on सुवास नेम्वाङले किन छाडे वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी ?
चितवन । नेकपा एमालेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका केपी शर्मा ओलीलाई महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलमध्ये एकलाई रोज्न केपी शर्मा ओलीलाई जति कठिन थियो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्न पनि त्यति नै गाह्रो थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि निवर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ दाबेदार थिए । ओली पछिको नेता बन्ने होडमा […]
निधि दम्पती कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत
November 29, 2021 N88LeaveaComment on निधि दम्पती कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र अनामिका निधि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। कांग्रेस १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार धनुषा क्षेत्र ३ मा भएको प्रतिनिधि छनोटमा दुवै जना सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएका हुन्। अनामिका उपसभापति निधिकी श्रीमती हुन्। त्यस्तै, कांग्रेस धनुषा-३ को क्षेत्रीय सभापतिमा धीरेन्द्र निधि निर्वाचित भएका छन्। उनी उपसभापति निधिका भाइ […]
November 29, 2021 N88LeaveaComment on ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजाले सामाजिक संजाल तताउँदै, अहिलेसम्मकै बो’ल्ड अवतारमा (तस्विर)
काठमाडाैं । चर्चित पत्रकार ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा नायिकाको रूपमा डेब्यु गरिन् । धमला दम्पती आफैले निर्माण गरेको उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजको चर्चा भने राम्रै भयो । उनी सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय छन् । पछिल्लो समय उनले बोल्ड तस्विरहरु सामाजिक सञ्‍जालमा शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । यसैक्रममा उनले […]
November 29, 2021 N88LeaveaComment on रूप र शरीर हेरेर प्रेम गर्दा धोका पाइदो रहेछ, माया गर्ने मान्छेसँग प्रेम गर्नुस कैले रुनुपर्दैन: नायिका पूजा शर्मा
काठमाडौँ । फिल्मी दुनियाँमा नायक-नायिकाको अफेयर्स, ब्रेकअप अनि प्याचअपका चर्चाहरू सार्वजनिक हुनु नौलो हैन। नायिका पूजा शर्माको हकमा पनि यस्तै भयो। उनी फिल्मी क्षेत्रमा आएदेखि उनको नाम धेरैसँग जोडियो।निर्देशक सुदर्शन थापासँग नाम जोडियो। लामो समय यी दुवै प्रेमी-प्रेमिकाको रूपमा चिनिए। बिचमा दुवैको ब्रेकअपको हल्ला आयो। केही हप्ता अगाडि सुदर्शनले अर्कैसँग विवाह गरे। बिचमा उनको नाम […]
मुकेश पाेखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ‘बार्गेनिङ’ का लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारीको रणनीति अघि सारेका रावल ओलीले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि चर्चाकै लागि भए पनि ‘ब्याक’ हुन चाहेनन्। चितवनमा एमालेको दशौं महाधिवेशन शुरू भएयता सबैभन्दा चर्चामा रहेका पात्र हुन् भीम रावल। चर्चाको मुख्य कारण हो– केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिंदै पार्टी अध्यक्षमा उनको दाबेदारी। बन्द सत्रले ओलीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व […]
November 29, 2021 November 29, 2021 N88LeaveaComment on १९ वर्षकी करिना पुरीले जितिन् कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सिन्धुपाल्चोककी १९ वर्षीया करिना पुरीले जित हात पारेकी छिन्। पछिल्लो समय देशभर तल्लो तहबाट युवा नेतृत्व छानिने क्रम चलिरहेको समयमा सिन्धुपाल्चोकको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट खुला महिलातर्फ उम्मेदवार दिएकी पुरीले महाधिवेशनमा २५ जनालाई हराउदैँ सबैभन्दा धेरै ४०९ मत ल्याएर जित हात पारेकी हुन्। त्यस्तै उनी नेपाली कांग्रेसको सूचना, सञ्चार […]
एमाले अध्यक्षमा ओली-रावल भिड्ने
November 29, 2021 N88LeaveaComment on एमाले अध्यक्षमा ओली-रावल भिड्ने
सौराहा । नेकपा एमालेको अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र डा. भीम रावलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सहमति नभएपछि अध्यक्षमा ओली र रावलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । सोमबार बिहान ओली र रावलले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले दसौं महाधिवेशनको बन्दसत्रस्थलमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर […]
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा पोखरेलद्वय निर्विरोध
November 29, 2021 N88LeaveaComment on एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा पोखरेलद्वय निर्विरोध
सौरहा । नेकपा एमालेको जारी दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सोमबार बिहान भएको मनोनयनमा वरिष्ठ उपाध्ययक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शङ्कर पोखरेललगायत नेता निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी मनोनयनको समय सकिएपछि उनीहरु निर्विरोध भएका हुन् । यस्तै उपमहासचिवमा प्रदीपकमार ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध हुनुभएको छ […]